अपराध लुकाउन नाम र धर्म परिवर्तन गरेपछि…. – Saurahaonline.com
अपराध लुकाउन नाम र धर्म परिवर्तन गरेपछि….
कठमाडौँ, २२ कात्तिक । व्यक्ति हत्याको १० बर्ष पूरानो घटनामा संग्लन भएको सूचनाका आधारमा काठमाडौं प्रहरी परिसरले असोज ३० मा गोर्कणेश्वरबाट एकजनालाई पक्राउ गर्‍यो। बौद्ध क्षेत्रमा गार्मेन्टमा काम गर्ने भनिएका बाहिद खानले पक्राउपछि आफू उक्त व्यक्ति नभई बिजयकुमार श्रीवास्तव भएको नागरिकता पेश गरे।
खानले आफु बिजयकुमार श्रीवास्तव भएको बताउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ९जिप्रका०सर्लाहीबाट निकालेको नागरिकता पेश गरे। प्रहरीले सर्लाही प्रशासनबाट उक्त नागरिकताको बैधानिकता जाँच गरेपछि रहस्य खुल्यो, उक्त नामको नागरिकता जारी नै भएको रहेनछ। अर्थात खानले नक्कली नागरिकता निकालेर आफ्नो परिचय बदलेका रहेछन्। कतिसम्म भने मुस्लिम समुदायका खानले उक्त घटनापछि आफूलाई हिन्दु धर्मावलम्बीकै रुपमा चिनाइरहेका रहेछन्। खानले मकवुल मन्सुरको नागरिकताको फोटोकपीका आधारमा मोबाईल सिम निकालेर चलाईरहेको पनि प्रहरीले पत्तो लगाएको छ।,आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।